8 Waxyaabaha Muhiimka ah ee Aad U Baahantahay Inaad Ka Ogaato Koorsada ITIL
ITIL waa mid aad u macquul ah isticmaalka. Ururkaagu uma baahna isticmaalka habsocodka oo dhan. Waad ku dhejin kartaa marxaladaha marxaladda dhammaatay. ITIL waa habka ugu habboon ee hababka ugu fiican iyo hababka ugu fiican ee kugu xoojiya inaad bixiso adeegyo dagaal badan kharashyada diiradda. Waa qaab ah in la qaato kaddib marka la xayiray adeegga IT-ga. Maxaa badan, qof kasta wuxuu u baahan yahay taas (iyo kadib, waxay u baahan yihiin.)